Kooxda Inter Milan oo Javier Pastore isha ku haysta bisha Jannaayo – Gool FM
Kooxda Inter Milan oo Javier Pastore isha ku haysta bisha Jannaayo
(Milano) 04 Sebt 2017 – Inter Milan ayaa sida sida lasoo werinayo waxay xiisaynaysaa saxiixa laacibka khadka dhexe ee Paris Saint-Germain jaalle Javier Pastore.
Laacibkan 28-jirka ah ayaa u muuqda mid laga yaabo inuu iskaga dhaqaaqo naadiga Ligue 1 bisha Jannaayo waxaana lagu heli karaa €30m.
Sida ku dhigan El Gol Digital, naadiga Nerazzurri ayaa u diyaar ah inay bixiso lacagta ay laacibka ku bixinayso PSG iyo xulka Argentina, kaasoo 2 gool dhaliyay 5 kulan oo uu saftay fasal-ciyaareedkan.
Yeelkeede, Inter Milan ayaa laga yaabaa inay hardan kala kulanto kooxda reer Spanish ee Atletico Madrid, maaddaama ay cunaqabataynta saarani ka qaadmayso dhamaadka sanadkan, iyadoo ay kooxda Diego Simeone doonayso inay is xoojiso kaddib Diego Costa iyo Vitolo.
Pastore, oo PSG ku sugnaa tan iyo 2011, ayaa aqoon u leh Serie A oo uu kusoo meteley Palermo.
Ronaldo oo xaraashay Copy-ga Rasmiga ah ee abaal marintii Ballon d’Or uu ku guuleystay markii uu joogay Man United